07 Feb, 2020 - 00:02	 2020-02-06T22:43:30+00:00 2020-02-07T00:02:03+00:00 0 Views
Zvirimwa zvakadai sechibage zvave kusvava nekupiswa nezuva zvichitevera kusanaya kuri kuita mvura kumativi mana enyika.
VARIMI vekudunhu reMashonaland West vari kunyunyuta pamusoro pezvirimwa zvavo zvakasiyana izvo zvave kusvava nezuva zvichitevera kusanaya kwemvura kwenguva inodarika svondo.
Vanoti Hurumende inofanira kukoshesa nyaya dzemadiridziro nedonzvo rekugadzirisa dambudziko rekusanaya kwemvura zvakanaka.
Varimi vane zvirimwa zvakanganiswa nekunyanya kupisa kwezuva vari munzvimbo dzinosanganisira Sanyati, Makonde, Zvimba, Hurungwe, Mhondoro-Ngezi neKariba.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department (MSD) rinoti pane mwando uri kupinda munyika uchibva nekudivi reZambia neMozambique uyo unogona kuita kuti mvura izonaya kumativi mana enyika nekufamba kwenguva.
“Mvura inotarisirwa kunaya munzvimbo dzakasiyana dzenyika,” inodaro MSD muchinyorwa chakabva kubazi iri.
“Pane mwando uri kupinda munyika uchibva nekuZambia neMozambique uyo unotarisirwa kukonzera kunaya kwemvura kumatunhu akawanda enyika.”
VaTapiwanashe Chikondowa vanorimira vari kuDoma uye vari nhengo yebhodhi resangano reFederation of Young Farmers Club of Zimbabwe vanoti zvimwe zvirimwa zvave kutaridza kuti zvakanganiswa nekunyanya kupisa kuri kuita zuva.
“Chibage chave kusvika mumabvi uye kwapera svondo kubvira apo mvura yakapedzisira kunaya. Zvirimwa zvave kuda mvura zvakanyanya,” vanodaro.
VaChikondowa vanoti mainaro emvura asiyana nakare nekuda kwekusanduka kuri kuita mamiriro ekunze nekudaro varimisi vari pasi peAgritex vanofanira kusimbaradza chirongwa chavo chekupa mazano kuvarimi nechinangwa chekuti vadyare mbesa dzavo nenguva.
“Rimwe dambudziko guru kushomeka kwezvekushandisa pakurima zvakadai semadiridziro – kusanganisira anoshandisa simba remoto unobva kuzuva – pamwechete nemidziyo yekurimisa yemazuva ano,” vanodaro.
“Izvi zvinofanira kukosheswa. Ndiyo nzira yakanaka yekufamba nayo.
“Kusanduka kwemamiriro ekunze kuripo zvechokwadi.”
Agritex, vanodaro VaChikondowa, inofanira kuongorora, kusanduka kuri kuita mwaka mumatunhu akasiyana enyika yozivisa varimi pamusoro pezvinhu zvakadai semusi wekudyara mbesa, mhando dzembesa dzacho uye varimi vanofanirwa kudyara zvirimwa zvinoshingirira muzuva.
Vamwe varimi vachakachengeta feteraiza, mbeu nemishonga izvo vasina kushandisa nekuda kwekusaziva mamiriro achange akaita kunze uye nemanairo emvura.